Kulan Qaadhaan loogu ururiyey Abaaraha oo Madaxtooyada ku qabsoomay iyo Xaddiga Lacag ay ku yabooheen Ganacsatada waaweyn ee dalku | Somaliland Post
Home News Kulan Qaadhaan loogu ururiyey Abaaraha oo Madaxtooyada ku qabsoomay iyo Xaddiga Lacag...
Kulan Qaadhaan loogu ururiyey Abaaraha oo Madaxtooyada ku qabsoomay iyo Xaddiga Lacag ay ku yabooheen Ganacsatada waaweyn ee dalku
Hargeysa (SLpost)- Madaxweynaha Somaliland Md Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirrada, ayaa maanta kulan ballaadhan kula qaatay Qasriga Madaxtooyada ganacsatada waaweyn ee dalka, kulankaas oo ujeeddadiisu ahayd sidii ay ganacsatadu taakulo dhaqaale uga geysan lahaayeen Abaaro baahsan oo ka taagan gobollada Bari ee dalka.
Wasiirka Madaxtooyadda Maxamuud Xaashi Cabdi oo kulankaas kaddib warbaahinta lahadlay, ayaa sharaxaad ka bixiyey najiitada kulankaas oo qaadhaan loogu ururinayey in ka badan Hal Milyan oo ruux oo ay noloshooda saamaysay Abaar baaxad leh.
Wasiirka Madaxtooyada ayaa shaaciyey in ganacsatadu dalku ay bixiyeen deeq lacageed oo gaadhaysa Hal milyan iyo shan iyo sodon kun oo doolar (1,035.000$) oo isugu jirta lacag kaas ah iyo raashin oo loogu talo galay in loogu gurmado dadka ku dhaqan gobolada barriga dalka ay ay abaarta baahsani soo food saartay.
Shirkada Dahabshiil Group waxay bixisay laba boqol oo kun oo doolar (200,000$)
Shirkada TELESOM waxay bixisay Boqol iyo konton kun oo doolar (150,000$) oo laba qaybood ah. Sideetan kun 80. 000 $ oo ay guddida ku wareejinayso iyo todobaatan kun (70.000$) oo ay gobolada kaga yabooheen.
Shirkadda OOMAR waxa ay ku yabooday raashin dhan afar kun oo qoys oo gaahaysa laba boqol oo kun oo doolar (200,000$).
Shirkada SOMCABLE waxay ku yaboohday laba boqol oo kun oo doolar (200,000$) oo khaash ah.
Xaaji Baxsane (Red Sea company) wuxuu ku yaboohay kontan kun oo doolar (50,000$).
Shirkada Al Harbi waxay ku habooday Sideetan kun oo doolar (80,000$), oo isugu jira sodon kun (30, 000$) oo doolar oo kaash ah Iyo konton kun (50,000$) oo raashin ah.
Sidoo kale waxa halkaas lacag dhan Kun doolar(1.000$) bixiyey Suldaan Maxamuud Xaaji Xuseen oo shirka ku sugnaa.